Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Zon’olombelona an-tsary
Tahiry isam-bolana Aogositra 2009 1 Lahatsoratra Oktobra 2007 1 Lahatsoratra Septambra 2007 1 Lahatsoratra RSS
Tantara mikasika ny Zon'olombelona an-tsary 20 Aogositra 2009
Kambodza : Manontany ny Oliravin'ny vanja milevina Mpanoratra Chhunny Chhean · Azia Atsinanana “ Mananjo ho tsara tarehy ny olona rehetra !” No nanombohan'ny Mpifaninana ho Oliravin'ny olona voan'ny vanja milevina ny taratasy misokatra nosoratany, izay fifaninanana natombok'i Morten Traavik avy ao Norvezy. Araka ny voasoratra ao amin'ny tranokalam-pifaninanana, hanomezana fankaherezana ireo mitondra takaitra noho ny vanja milevina sy hihaikana ny fijery ny...
Tonizia : Raofina eo an-tseranana ny bokin’ny bilaogera Mpanoratra Jennifer Brea · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Raha niverina hody tany Tunis avy tany Le Caire tamin’ny herinandro teo ny bilaogera Zizou from Djerba dia nahazo nihoatra noho ny firariana tonga soa nandrasany. Teo an-tseranam-piaramanidina tao Tunis dia nohodidinina mpiasan’ny Ladoany sy manamboninahitra I Zizou ka nosavaina tsara any entany, boky roa no notazonina tamin’izany. Tsy gaga...
Madagasikara: ny momba ny fandroahana any Frantsa Mpanoratra Lova Rakotomalala · Fifandraisana iraisam-pirenena Ny tahotra mpifindra monina, nampian’ny fifampihenjanana eo amin’ny samihafa volon-koditra sy ny rotaka tany amin’ny faritra manodidina ny tanandehibe tamin’ny ririnina 2005, no nanosika ny Minisiteran’ny atitany frantsay hanenjana kokoa ny ady amin’ny fifindra-monina an-tsokosoko. Voakasik’izany politikam-pandroahana mpifindra monina tsy manana taratasy manome alalana hisari-monina ao Frantsa izany ihany koa...